Gufgaf|Online आमिरकी छोरी ईराका प्रेमी !
आमिरकी छोरी ईराका प्रेमी !
गफगाफ - अभिनेता आमिर खानकी छोरी ईरा खान लाईमलाईटबाट टाढै छिन् । अहिले बलिवुडमा प्राय सेलिब्रेटीका छोराछोरीको डेब्यु गर्ने कुराले चर्चा पाईरहन्छ । तर ईरा भने यी कुराहरुबाट टाढै छिन् । ईरालाई सिनेमामा भन्दा पनि संगीतमा रुचि छ । यहि कारण पनि उनको डेब्युको खासै चर्चा सुनिँदैन ।लाईमलाईटबाट टाढै रहेपनि ईरा सामाजिक सञ्जालमा भने सक्रिय छिन् । बेलाबखतमा व्यक्तिगत जीवनका तस्बिरहरु सेयर गरेका कारण उनको चर्चा भईरहन्छ ।
हालै मात्र ईराले आफ्नो मिल्ने साथी मिशाल कृपलानीसँगका केही तस्बिरहरु सेयर गरिन् जसले उनको प्रेमको चर्चा चलेको छ । आफ्नो क्लोज फ्रेण्ड मिशालसँगका तस्बिरमा उनीहरुको बोण्डिङ स्पष्ट देखिन्छ ।सार्वजनिक तस्बिरमा उनीहरुको निकटता देखेर धेरैले उनीहरु प्रेमी प्रेमिका भएको अनुमान लगाएका छन् । ईरालाई सामाजिक सञ्जालमा नै अहिले मिशाल तपाईँको प्रेमी हो ? भन्ने प्रश्नहरु थपिएका छन् । सार्वजनिक तस्बिरमा पनि केहीले प्रतिकृयामा यस्ता प्रश्नहरु उल्लेख गरेका छन् ।
तर यस बारेमा ईराले केही पनि बालेकी छैनन् । बाल्यकाल देखि नै संगीतमा रुचि राख्ने ईराका साथी मिशाल कृपलानी पनि संगीतमै सक्रिय छन् । मुम्बईका मिशाल म्युजिक कम्पोजर हुन् । ईरा आमिर र उनकी पहिलो श्रीमती टिना दत्ताकी छोरी हुन् । पहिलो विवाहबाट आमिरका दुई सन्तान छन् छोरा जुनैद र छोरी ईरा । त्यस्तै सन् २००५ मा आमिरले किरण रावसँग विवाह गरे जसबाट एक छोरा छन् आजाद ।